Rose of Sharon: ၂၀၀၉ နှင့်အတူ
Posted by rose of sharon at 12:31 PM
Vista January 12, 2010 at 2:30 PM
အစွဲအလမ်းမထားပါနဲ့ မမ အဆင်ပြေဖို့ ကအရေးအကြီးဆုံး
Evy January 12, 2010 at 3:06 PM
ဆိုးလိုက်ကြတာနော် လူတွေကလည်း စိတ်ပျက်စရာ။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ January 12, 2010 at 3:18 PM
အနော် January 12, 2010 at 3:28 PM
မမရေ စေတနာဟာ လူတိုင်းနဲ့မတန်ဘူးဆိုတာ အထင်အရှားပဲနော်
မမရေ နောက်ထပ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်လေးမျိုး အမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့
ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ နှစ်သစ်လေးတွေချည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ :)
Nge Naing January 12, 2010 at 3:56 PM
Rose ရေ လာဖတ်သွားပါတယ်။ အိမ်လေး နှမြောစရာကြီး။ အလိုက်မသိတဲ့သူတွေက နေရာတိုင်းမှာ ရှိတယ်နော့်။ Holiday သွားတာတော်တော် ပျော်ခဲ့မှာပဲနော့်။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ချစ်ကြည်အေး January 12, 2010 at 6:31 PM
မရိုစ်. အိမ်နီးချင်းကောင်း ဖို့အရေးကြီးတယ်လေ...ပိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်လေးမျိုး ရပါစေနော်.....:D
sonata-cantata January 12, 2010 at 6:33 PM
Rose ရေ တူနေပြီ မသီတာလည်း တိုက်ခန်းလေး ရောင်းချင်လို့...
Dec ပြန်တုန်းက အခန်းကို စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ညီမကို ရောင်းပေးပါလို့ ပြောခဲ့တယ်။
Roseတို့ မိသားစု အတွက် ပိုကောင်းတဲ့ အိမ်ရပါစေ...
kiki January 12, 2010 at 7:30 PM
အလိုက်မသိတဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေကြောင့် စိတ်အနှောက် အယှက်ဖြစ်ရတာ အတော်ဆိုးတာပဲ နော် ။
ဒိထက်ကောင်းတဲ့ အိမ်လေးနဲ့ အိမ်နီးချင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကောင်းမှာ နေရဖို့ အတွက် အဟောင်းကို စွန့် ရတယ် ပဲ သဘောထားပေါ့ မရို့ စ် ရယ်
( စကားမစပ် အိမ်ခြံမြေဈေးတွေ တအားတက် နေတာ ။ တခု
ရောင်းပြီးရင်၊ နောက်တခုကို ချက်ချင်း အမြန် ပြန် ဝယ်ထားမှ စိတ်ချရမယ် နော် )
တောင်ငူသား January 12, 2010 at 8:00 PM
အစွဲလန်းမထားသင့်တာ မှန်ပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက် မဖြစ်မနေ အသုံးဝင်တဲ့ ပစ္စည်းမျိုး၊ တကယ်သုံးလို့ အဆင်ပြေတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးလေးတွေ ပျောက်ဆုံးတဲ့အခါ ပျက်ဆီးတဲ့အခါ တကယ်နှမြောဖို့ကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ချွတ်စွပ်တူတာ ဘယ်တော့မှ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ အမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း အခြေအနေ အချိန်အခါတွေအရ စွန့်ခွာဖို့ အကြောင်းဖန်လာရင်လည်း ထားခဲ့ရတော့တာပဲ။
အဲဒီထဲကမှ အိမ်။ အိမ် နဲ့ ပက်သက်ရင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အပြီးတိုင် စွန့်ခွာရတော့မဲ့အခါ ခံစားရမှုက အဆိုးဝါးဆုံးပဲ။
တကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံး အမြန်ဆုံး အစားထိုး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ အမခင်ဗျာ။
သက်ဝေ January 12, 2010 at 8:23 PM
ညီမ ရိုစ့် ပြန်ရောက်နေပြီကိုး...
ရန်ကုန်မှာ ပျော်ခဲ့ကြလား... ရန်ကုန်ပိုစ့်တွေတင်ပါအုံး.. မျှော်နေမယ်
အင်း.. ဟုတ်တယ် အိမ်နီးချင်းမကောင်းရင် စိတ်ညစ်ရတယ်...
ဒီလိုပဲပေါ့.. နောက်ကို ဒီ့ထက် အများကြီးကောင်းတဲ့ အိမ်လှလှလေး ရမှာပါ...
လသာည January 12, 2010 at 8:34 PM
ရိုစ်ရေ.. ကိုယ့်အတွက်အမှတ်တရပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အိမ်လေးရောင်းရတာ စိတ်ထိခိုက်နေလား..။ ဒီလိုပဲပေါ့ကွာ အပေါ်ကတစ်ယောက်ပြောသလိုပဲ ပိုကောင်းတဲအိမ်လေးနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေး ရမှာမိုလို့လို့ သဘောထားလိုက်နော်။
~ဏီလင်းညို~ January 12, 2010 at 9:04 PM
သိရင် ဆက်ဆံမိမှာတောင် ဟုတ်ဘူးနော်...။ ရေလည်းပေးရသေးတယ်...ဆဲလည်းဆဲတယ်ဆိုတော့... နည်းနည်းများသွားပြီ...။ တစ်ကယ်စိတ်မကောင်းဘူး....း((
(ဒါနဲ့ ကွိကွိစ်ပြောသွားသလို မြန်မြန်ပြန်ဝယ်လိုက်ဦးနော်...။ စိတ်ပူ၍ပြော၏...း))
Shinlay January 12, 2010 at 11:04 PM
ညီမရေ ရောင်းလိုက်တာကောင်းတယ်။ ကျမလည်း အဲ့ဒီလို ဒုက္ခမျိုး
မီယာ January 13, 2010 at 2:25 AM
အိမ်နီးချင်း မကောင်းတာ စိတ်ညစ်စရာကြီး... ဒီထက် ကောင်းတဲ့ အိမ်တလုံး ထပ်ရမှာပါ
ခြေလှမ်းသစ် January 13, 2010 at 9:47 AM
အမရေ တခါတခါမှာ အမှတ်တရ တွေလည်း စွန့်လွှတ်ရတာပဲနော် ... ကိုနဲ့ မထိုက်လို့ပဲ လို့ သဘေားထားလိုက်ပါနော် ..
ပျော်ခဲ့လား။ ဘာတွေစား ဘယ်တွေရောက်ခဲ့လဲ။ ရေးပါအုန်း အတွေ့အကြုံတွေ။
အိမ်လေးက ချစ်စရာကြီး။ ဒါပေမဲ့ အိမ်နီးချင်း တွေကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရရင်တော့ ရောင်းလိုက်တာပဲ ကောင်းပါတယ် ရို့စ်ရေ၊ အိမ်သစ်တက်ရင်း မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည် လုပ်ရင်း မင်္ဂလာထပ်ဆောင်လိုက်ပေါ့။ ပြီးတာပဲ။
Aster January 13, 2010 at 5:20 PM
အဲဒီ အိမ်လေးကို သိပ်ရင်းနှီးတာပါပဲ။ မဟုတ်မှ လွဲရော မဟာမြိုင်လမ်းထိပ်ကပဲ ဖြစ်မှာပါလေ။
MM January 13, 2010 at 6:32 PM
မမရယ် ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဘူး။
rose of sharon January 13, 2010 at 9:18 PM
ကော်မန့်ရေး၊အကြံပေး၊အားပေးသွားကြတဲ့ MM,Aster,Ma Eh,ခြေလှမ်းသစ်၊မီယာ၊ရှင်လေး၊ဏီလင်းညို၊လသာည၊သက်ဝေ၊တောင်ငူသား၊Kiki၊မသီတာ၊ချစ်ကြည်အေး၊ငယ်နိုင်၊အနော်၊အိမ်ချမ်းမြေ့၊Evy၊Vista တို့အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်....
Steve Evergreen January 15, 2010 at 5:56 PM
visited. i do enjoy your posts
Steve Evergreen January 15, 2010 at 5:57 PM
Visited. I do enjoy your posts to be honest
ကိုလူထွေး February 7, 2010 at 6:10 PM
Angel Shaper February 20, 2010 at 3:10 AM
ချစ်မရေ... အဲဒါ ဘုရားလမ်းပြတာပဲလေ။
လူ့အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ ကောင်းတယ်လို့ မထင်တဲ့အရာတစ်ခုဟာ ဘုရားအလိုနဲ့အညီ အကောင်းဆုံးဖြစ်လာတာပဲမဟုတ်လား။ ဘုရားသခင်က အကောင်းဆုံးလမ်းပြပို့ဆောင်နေပါတယ်။ ဘုရားသခင် လမ်းပြပို့ဆောင်ပါစေ။
kyaw May 5, 2010 at 2:47 PM
ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းရင် နေရတာသိပ်စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပါတယ် အမရယ်... နောက်ထပ်နေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ